Uru na ọghọm nke -lọ Akwụkwọ Afọ - Ezinụlọ
Nwa Gị Should Kwesịrị Schoolga Akwụkwọ Kwa Afọ? Lee Uru na ọghọm
Should Your Child Go Year Round School
You nweghị ike ịkwụ anyị ụgwọ ka anyị bụrụ ndị na-eto eto ọzọ (ugh, ọtụtụ homonụ), mana anyị agaghị eche maka ịlaghachi na ezumike ezumike ogologo ndị ahụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na kama izu 10 na 12 na-apụkarị, nwa gị nwere izu isii ma ọ bụ izu itoolu nke ụlọ akwụkwọ na-esote izu abụọ ruo izu anọ n'afọ niile? A makwaara dị ka kalenda kwesịrị ekwesị, ụlọ akwụkwọ dị iche iche kwa afọ nwere otu ụbọchị ahụ eji eme ihe n'ime klaasị dịka usoro ihe omume nke ụlọ akwụkwọ ọdịnala, mana nkwụsịtụ dị mkpụmkpụ ma na-agakarị. Na-akpali akpali? N’ebe a, ụfọdụ uru na ọghọm dị n’agụm akwụkwọ kwa afọ.
Gbasara : Montessori, Waldorf ma ọ bụ Reggio Emilia: Kedu ihe dị iche na ọdịiche dị n'etiti ụlọ akwụkwọ ọta akara?
Schoolslọ akwụkwọ kwa afọ nwere ike belata ọnụ ọgụgụ mmadụ karịrị akarị
Maka ụlọ akwụkwọ ndị na-agagharị n'okike, ịhazigharị afọ kalenda nwere ike ịbụ azịza bara uru. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ: Na mgbakwunye na iwebata mmemme nke afọ, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ na-agbagha usoro ihe omume ha ka enwere otu ụmụ akwụkwọ (ma ọ bụ karịa) na ezumike mgbe ndị ọzọ nọ na nnọkọ. Nke a makwaara dị ka ịga akwụkwọ n'ọtụtụ-afọ, nke a pụtakwara na a na-anụ ụtọ ụlọ akwụkwọ na akụrụngwa ya n'ime afọ niile (kama ịnọdụ efu ọnwa atọ).
Na Kpochapu Oyiyi Oyi
Nnyocha na-egosi na mgbe ụmụaka anaghị etinye aka na isiokwu ụlọ akwụkwọ na ogologo oge, ha na-etinye ihe ọghọm n'ọrụ ndị ahụ. (Enweghị ihe ijuanya n'ebe ahụ.) Kachasị anya ihe ọmụma furu efu dabere na ọkwa ọkwa, isiokwu na ego ezinụlọ, mana otu akụkọ site na ANDlọ ọrụ RAND chọpụtara na nkezi ndapụta mmụta oge ọkọchị maka ụmụ akwụkwọ America na mgbakọ na mwepụ na ịgụ nha anya otu ọnwa kwa afọ. N'ihi nke a a na-akpọ 'ụbụrụ ụbụrụ n'oge okpomọkụ,' ndị nkuzi ga-etinye izu ole na ole mbụ nke oge agụmakwụkwọ ọhụrụ maka ume ọhụrụ n'afọ gara aga. Jiri ya ma ọ bụ tufuo ya, n'ụzọ bụ isi.
Ma oge na-aga n’ihu n’ụlọ akwụkwọ agaghị eme ka nwa gị amaka
Ya mere, ebe a ka ọ na-aghọ aghụghọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nchọpụta yiri ka ha kwenyere na ọghọm mmụta mmụta oge anwụ dị adị, ọ dị ka ọ nweghị nkwekọ gbasara etu esi ogologo oge nọrọ na klas metụtara agụmakwụkwọ ịga nke ọma . Otu ọmụmụ bipụtara na Akwụkwọ akụkọ nke Urban Economics ọbụna chọpụtara na ịga akwụkwọ ọtụtụ-afọ na-ebute nkwụsị nke pasent 1 ruo 2 na ọkwa mba maka ịgụ, mgbakọ na mwepụ na akara asụsụ, ma e jiri ya tụnyere kalenda ọdịnala. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ụka na ọ bụ ogo izi ihe dị mkpa n'ezie, karịa oge ejiri nọrọ na klaasị.
E nwere ọtụtụ ihe nkwụsịtụ n'oge afọ
Obere oge ma oge nkwụsịtụ nwere ike ịpụta obere nkuzi na ụmụ akwụkwọ, ma nye ezinụlọ ohere ịde akwụkwọ njem na oge oge. (Hey, July ndị ahụ na-aga Disneyland adịghị abịa ọnụ ala.) Agbanyeghị, ọtụtụ nkwụsịtụ a pụtakwara na ndị nne na nna ga-achọta ihe ngwọta ụmụaka ga-adịte aka, nke nwere ike bụrụ ihe dị oke ọnụ.
Gbasara : 12 Genius tozọ iji chekwaa ego na Disney
Ma, enwere ike chedhazi ihe Isiokwu
Ndị nne na nna nwere otu nwatakịrị na usoro ụlọ akwụkwọ nke afọ na nke ọzọ na usoro ọdịnala ga-enwe ọtụtụ isi ọwụwa na-anwa ịhazi usoro ihe omume. (Naanị ịnweta otu nwa ewu, inye nri na bọs siri ike.)
Njikọ: Brzọ mara mma 6 iji mee ka ụmụaka gị pụọ n'Ọnụ Fzọ
Ihe ngosi Newman Studio / Getty Images
Usoro Omenala Emechiela
Laa azụ n'ụbọchị ahụ, ọtụtụ ezinụlọ na-arụ ọrụ ugbo ma na-atụ anya ka ụmụaka nyere aka rụọ ọrụ ugbo. Neededmụaka kwesịrị ịhapụ ụlọ akwụkwọ n'oge ọnwa ọkọchị n'ihi na ọ bụ oge dị mkpa maka ihe ubi. Bọchị ndị a, imirikiti ụmụaka anaghị etinye aka dịka ndị ọrụ ugbo, yabụ ndị na-akwado agụmakwụkwọ afọ niile na-arụ ụka na oge eruola iji kpochapụ kalenda ụlọ akwụkwọ ochie.
-Lọ akwụkwọ kwa afọ nwere ike ibute obere oge ezumike
Na mkpumkpu oge dị mkpụmkpụ, ị nwere ike belata ohere nke ịnụrụ nwa gị ka ọ kwuo okwu ndị a na-atụ ụjọ 'Ọ na-agwụ m ike na nkeji ise ọ bụla nke oge ọkọchị. (Enwere ike.)
Foto Jupiterimages / Getty Images
Mana enwere ike ime ka o sie ike maka ụmụaka ịchọta ọrụ
Oge okpomọkụ bụ oge kachasị ewu ewu maka ụmụ akwụkwọ toro eto iji nweta ego ọzọ (ma ọ bụ kọleji). Ọ bụghị naanị na ọrụ ndị a n'oge okpomọkụ dị ukwuu maka ihe gbasara ego (anyị mere ụmụaka na-egbu oge azụ), mana ha nwekwara ohere magburu onwe ya iji mụta ihe mmụta dị mkpa dị ka ọrụ, ụkpụrụ omume na ihe kpatara inye ndị enyi gị ice cream n'efu site na ngwa ngwa -food gig abụghị ezigbo echiche.
Gbasara : 7 Ihe Nne Na Nna Ọ bụla Kwesịrị Ime Tupu Afọ Schoollọ Akwụkwọ amalite
onye bu nwunye john cena
meghan markle ihe nkiri na tiivi
ntutu daa ịchịkwa ọgwụgwọ ụlọ
otu esi akwụsị ntutu na ụmụ nwanyị
uru ahụike nke almọnd soaked
echiche maka afọ ọhụrụ